Pashure-okutengesa Service - Dongguan Yuechuang kushandisa michina Co., Ltd
Basa muuzivi YueChuang: Wokuvimbika uye pragmatic, nyanzvi uye vakarongeka, uye kukunda zvisamumirira pamwe , kupa vatengi pamwe nyanzvi uye vakarongeka pashure-okutengesa basa, tinoita zvinotevera zvipikirwa dzakarongwa kuti vatengi dzedu:
1. michina All uye midziyo achitengeswa vekwedu, kubva musi kugamuchirwa kugamuchirwa, vakasununguka michina kunopindirana garandi kuti gore rimwe (kunze kukuvara nevanhu), kubva midziyo kugamuchirwa mushumo akasaina, mhando dzose zvakakanganiswa dzose kushandiswa kubudikidza Party B ndiye anokonzera vakasununguka kuvariritira uye Replacement, akapfeka zvikamu maererano chibvumirano pakati mapati, ichipa nyanzvi hwokugadzira rutsigiro upenyu.
2. VietNin ​​achagovera kudzidziswa mutengi michina dzaishandisa uye ouinjiniya wevanamakanika mukushanda uye vanhuwo mashandiro kunze kusvikira kwokudiwa inogona vakazvimiririra kuvhiyiwa uye troubleshooting.
3. Mushure nokuvhura okutengesa Hotline maawa 24 pazuva, isu achapindura chokwadi uye zvinopa mazano nyanzvi mushure mekugamuchira rokugadziridza runhare. Kana uchida kuenda panzvimbo yokuzvigadzirisa, anosvika panzvimbo maererano yakarongwa nguva.
4. Mushure garandi nguva anofa, kambani yedu achapa kuvariritira basa uye hwokugadzira rutsigiro maererano nemamiriro ezvinhu chaiwo, uye zvakanaka akamurairawo zvokuvakisa, nenhumbi uye basa mabasa.
5. Ipa kwoupenyu hwose basa rwokugadzira rutsigiro.
Ipai vatengi vane hwokugadzira rutsigiro rwakakwana uye pashure-okutengesa basa kubatsira vatengi uwane basa uye basa, ndirarame kugadzirwa pezvakaitwa, kuvandudza zvinhu, dzikamisa chigadzirwa quality, kuwedzera fekitari kugadzirwa kunyatsoshanda, kuderedza hwokugadzira zvinodiwa chokuita vashandi, chinogonesa kushandisa michina kushanda zvakanaka, uye zvibereko nani uye yakavimbika zvigadzirwa. Automotive connectors, Toyota kwakaita car-assembler kuti motokari connectors vari kuvimbwa.